Chaayinaatti namoota shanan akka nama ajjeesaniif osoo tokko isaan kaan bitanii harkatti fashalaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Chaayinaatti namoota shanan akka nama ajjeesaniif osoo tokko isaan kaan bitanii harkatti fashalaa'e
Image copyright Mana Murtii Qe'ee Naaning
Gareen bitamanii nama ajjeesan hojii ajjeechaa akka raawwataniif itti bitaman kana osoo tokko isa kaan qacaranii shirri kun harkatti fashala'uusaatiin hidhaman.
Kun kan ta'e kutaa Gu'anguuz, Chaayinaa keessatti.
Jalqabarratti abbaa qabeenyaa Tan Youhui jedhamu nama dorgomaa isaa ta'e tokko ajjeesisuu barbaade. Kana galma geessifachuuf ammoo, maallaqa $282,000 ta'u baasuudhaan nama ajjeesu bitate.
Kun odeeffannoo dhaddacha yakkamtoonni kunneen irratti himatamanirratti kan dhiyaatedha.
Haata'u malee, namichi $282,000 akka dorgomaa abbaa qabeenyaa sana ajjeesuuf bitame dabarsee ajjeeftuu biraa bita.
Namichi akka ajjeesuuf ofiin bitame kun maallaqa ofiin fudhate $282,000 kna irraa $141,000 baasuun nama ajjeesu kan biraa bita.
Ilmi dhiiraa hanga ganna meeqaatti warra waliin jiraachuu qaba?
Gudeeddiin mucaa waggaa 8tii dheekkamsa guddaa kaase
Namni akka dorgomaa abbaa qabeenyaa sana akka ajeesuuf bitame sun darbee ajjeeftuu biraa bitate. Inni lamaffaa irratti bitame kun ammoo nama sadaffaa bitate.
Inni sadaffaa, nama afraffaa osooma jedhanii hanga nama shaniitti dadabarsaan kontoraata ajjeesuu kana walitti daddabarsan.
Karoorri kun garuu nama ajjeesuuf bitame isa dhumaa [shanaffaa] irra yeroo ga'u fashalaa'e.
Kan fashalaa'uu danda'es, namichi dorgomaa abbaa qabeenyaa akka ajjeefamu barbadame kun maqaan isaa Wei jedhama.
Ajjeestuun bitamtuu shanaffaa kun nama akka ajjeefamu itti bitame kana kaaffee tokkotti arduudhaan akka du'eetti dhiyeessuu kan jedha yaada dhiyeesse.
Shirri kun bakka kanatti harkaa jigde jechuudha.
Namoonni kunneen ja'an - warra ajjeesuuf bitamaniifi abbaa qabeennyichaa isa warra ajjeesan kana bitate Obbo Tan, yakka yaalii ajjeechaatiin himatamanii mana murtii Nanning, Gu'aangzii dhiyaatan.
Dhimmi yakkamtoota kanaa qorachuunis waggoota sadii fudhateera.
Shirri ajjeestota qacaruu kun waldhabuu dhimma ogummaa bara 2013 keessa Obbo Wei dhaabbata Obbo Tan irratti tarkaanfii seeraa fudhatee ture.
Odeeffannoon kun akka marsartiitiin Mana Murtii Hawwaasaa Dhiyoo Naaniing jedhuttidha.
Adeemsa seeraa dheeraa ta'e hordofuudhaan maallaqa dhabuu sodaachuun Obbo Tan, nama Xi Guangan jedhamu akka Obbo Wei ajjeesuuf horii $282,000 kenneef.
Nama waggaa 250 ol itti murtaa'e
Kan jalqaba akka ajjeesuuf bitame Obbo Xi Guangan garuu darbee nama bitamee ajjeesu biraa Obbo Mo Tianxiang jedhamu akka Obbo Wei ajjeesuuf gaafate.
Namichi jalqaba ajjeesuuf bitame kun darbee maallaqa ittiin bitameerraa $141,000 kan ta'uun nama biraa kana [Obbo Xi] bitate kun amallee abbaa qabeenyichaatti deebiyuun abbaa qabeenyaa naaf ajjeesi jedhu kana maallaqa dabalataa gaafate.
Erga Obbo Wei ajjeefnee booda $141,000 naaf dabalta jedhechuun gaafata.
Obbo Mo waliigaltee ajjeesuu kana erga fudhateen booda nama biraa Yang Kangsheng jedhamu akka maallaqa warra Chaayinaa ¥270,000 jalqaba fudhatee kan hafe ¥500,000 ammoo erga ajjeesee booda fudhatuun waliigalteerra ga'an.
Kan sadaffaarratti akka ajjeesuuf bitame Obbo Yang Kangsheng ammoo darbee nama biraa maallaqa warra Chaayinaa ¥200,000 jalqabarratti kaffaluufiin erga Obbo Wei ajjeesee booda ammoo ¥500,000 akka fudhatutti waliigalan.
Dhumarratti, daddabarse warra bitamanii nama ajjeesuuf turanii kun kan dhaabbate, yeroo Yang Guangsheng nama shanaffaa Ling Xiansi jedhamu maallaqa warra Chaayinaa ¥100,000 kaffaluufiin akka Obbo Wei ajjeesuuf itti gaafatetti ture.
Image copyright Nanning Intermediate People's Court
Goodayyaa suuraa Namoonni ja'anuu - abbaa qabeenyaa kan jalqaba ajjeechaaf nama bitee hidhamaniiru
Namni shanaffaarratti bitame, Ling, garuu ajjeechaa raawwachuurra Obbo Wei waliin kaaffeetti beellamuun walarguu murteesse.
Yeroo kaaffeetti walarganittis, namni isa rukkutuuf ta'u waan jiruuf lamaan isaanii waliigaluun ajjeechaa sobaa (fakkeessuu) karoorsina yaada jedhu dhiyeesseef.
Obbo Wei yeroo hudhamaafi rukutamaa jiruu fakkeessuun suura kaasuun Obbo Ling gara Yang Guangsheng geessuun agarsiisee amansiisu walii galan.
Dhimmi kun jalqaba kan gara seeraa geeffame bara 2016 ture. Garuu namoonni shira kna xaxaa turan ja'anuu ragaan waan irratti hirgamiin tureef to'annoo jala hin oolfamiin turaniiru.
Barreeffamni ajjeefamuu Jamaal Kashoogjii mul'isu maxxanfame
Obbo Tan, Obbaan qabeenyaa nama bitamee nama ajjeesu jalqabaa kan qacare kun, hidhaa waggaa shaniin adabame. Namni jalqabaa akka ajjeesuuf bitame Obbo Xi ammoo hidhaa waggaa sadiifi ji'a ja'aatiin adabameera.
Yang Kangsheng fi Yang Guangsheng lamaan isaanii hidhaa waggaa sadiifi ji'a sadiin adabamaniiru. Obbo Mo ammoo hidhaa waggaa sadiinyeroo adabaman Obbo Ling ammoo hidhaa waggaa lamaafi ji'a torbaan adabamaniiru.
Maatiin Ameerikaa ilmasaanii kan dargaggeessaa waggaa 30 himachaa jiru
Hindiitti gudeeddiin mucaa dubaraa waggaa 8tii dheekkamsi akka babal'atu godheera
Barreeffamni waa'ee ajjeeffamuu Jamaal Kashoogjii mul'isu gaazexaa irratti maxxanfame
11 Fuulbana 2019
Keemikaal injinara liistiroo ta'ee jireenyaan wal'aansoo qabe
Ajjeechaa Waldiyaa 'cimsine balaaleffanna' jedhe MNO
Awustiraaliyaan bala ibiddaaf labsii yeroo muddamaa labsite
Poopi Firaansiis 'Sudaan Kibbaa daawwachuuf yaada qaba' jedhan
Mormitoonni pirezidaantii Boliiviyaa dirqiin aangoo gadi dhiisisan
Hongeedhaan kan rukutamte Kooriyaan kaabaa deggersa Kooriyaa Kibbaa didde